Taariikhda My Butros » 5 Waxyaabaha aad waa inay ka fogaadaan Ka hadalka ku saabsan ku Date A First
Taariikhda A horeysay noqon kartaa cutubkii ugu horeeyay ee sheeko cirfiid ah, laakiin waxa ay sidoo kale noqon kartaa musiibada wadarta uun sababtoo ah waxaad taabtay ah "lama taabtaan" mowduuca. Muuqataa jacaylka Helitaanka si fudud filimada ee, laakiin isla nolosha dhabta ah waa? Romance mar walba ma habsami duuli, iyo si aad u hesho saaxiibkiisa aan naf waa u fududahay qof walba oo naga mid ah. Mararka qaarkood waxa ay su'aashu tahay oo og sida ay u dagaalamaan, waxaa ka, iyo sida looga fogaado qaadashada pas Faux, gaar ahaan ku saabsan taariikhda ugu horeeyay. Inkastoo ay tahay markii ugu marka aad isku daydo in aad soo ogaato waxyaalaha aasaasiga ah oo ku saabsan midba midka kale, waxaa ugu fiican in aad ku eekaan mowduucyo ammaan wada hadalka. Halkaan waxaa ah waxyaabo qaar ka mid ah waa in aad ka fogaato ka hadlayaan on taariikhda ugu horeeyay:
Qofna sheegay aragtidaada siyaasadeed aan waa muhiim, laakiin hadana dhab ahaantii ma samayn mawduuc wada hadal ammaan ah taariikh ugu horeeyay. Barbaarinta kaliya siyaada abuuro jawi cadaawadda, iyo tani ma aha waxa aad rabto. Anyway, ma waxaan kaa dhigi doonaa Jamhuuriga ah noqdaan nuugaa dimuqraadiga ama xigeenka ... ugu yaraan ma marxaladan ee xiriirka.
Your ex(tani waa)
Haddii aadan wiil dhalinyaro ah, Runtii, runtii, aad leedahay qaar ka mid ah xiriirada ku guuldareystay in boortofooliyada, iyo tan u wanaagsan. Qof walba sameeya. Waxba ma ahan wixii aad ku leeyahay ku saabsan ex / exes, maalinta ugu horeysa ee ma ahan markii ugu saxda ah ee wada hadalka noocan oo kale ah. Waxay ahayd jawaan maamula? Isagu liishaan a total? Tani ma aha wax aad dooneyso in aad u sheegtaa qof aad hadda uun la kulmay sidii uu isagu / iyadu u malaynayso inaad tahay wax kale ma aha naf qadhaadh. Haddii dhinaca kale, Adigaa haya erayadii kaliya weyn inuu ku yidhaahdo oo ku saabsan, laga yaabaa in aad ka tagto aragti ah inaad aan helin korkooda,, adiga iyo ma yihiin, Sidaa darteed, diyaar u yahay inuu bilaabo xidhiidh kale. Haddii taariikhda isku dayo si aad u ogaato sababta aad u soo ururiseen aad la ex, ku siiyo jawaab ah aan caddayn in ku jira ma eedayn ama faleynin.
Your ee la soo dhaafay si aan nadiif ah
Nadiifiye, ama dirtier, waxaan oo dhan waxay leeyihiin ee la soo dhaafay a, iyo tan micnaheedu ma aha waxaan xaq u leedahay in la helo jacaylka. Si kastaba ha ahaatee, taasi kama dhigna in aad ku soo faana ku saabsan misshapes ee la soo dhaafay ku saabsan taariikhda ugu horeeyay. Waxaad heli doontaa inay u yimaadaan oo nadiif ah oo ku saabsan qaar ka mid ah waxyaalihii ugu yaraan barta ah uu ku jiro marxaladaha hore ee aad xiriir, laakiin ma aha in aad in lagu cabsiiyo taariikhda ka fog markii ugu horeysay ee aad la kulantid.
Your saacad nafleyda
Sida waqtiga dhaco by, haweenka gaar ahaan, laakiin sidoo kale rag bilaabaan in ay maqlaan ay saacad noolaha sax. Waxaad u helay in ay da 'in meesha aad rabto in aad bilowdo qoyska ka mid ah iyo inay u leeyihiin kids, laakiin waxaa lagu talinayaa inaad marka hore aad heshaa qof wax sax ah, waayo,. Ha gelin gaadhigii hor faraska!
meel aad jaceshahay galmada
Waxba ma ahan wixii aad u Gabdooma iyo waxa aad ka heshid sameyntiisa sariirta, ma aha waxa ugu horreeya ee aad rabto in aad taariikhda si aad u ogaato adiga kugu saabsan. Sidoo kale, tani ma aha waxa ugu muhiimsan ee aad rabto in aad ogaato oo ku saabsan lammaane kara. Sug ilaa aad ka gaaro heerka saxda ah ee Shukaansiga in ay ka hadlaan waxyaalahan ku saabsan.